Varaidzo - Kufamba Kwemhuri | Seymour, IN | Jackson County Vashanyi Center
Kunze Kunakidzwa muJackson County, IN
Jackson County inogara iine dzakasiyana siyana zvekunze zvekuvaraidza zviitiko zviripo. Zvisinei nemwaka, pane chimwe chinhu chinosangana nezvinodiwa nemunhu wese.
Masango uye Zvisikwa Zvinochengetedza
Nezviuru zvemaeka emahombekombe, masango, uye zvinochengetwa munzvimbo iyi, Jackson County inzvimbo yakakwana kune chero munhu anoda zvisikwa. Inemhando dzakasiyana dzemhuka dzesango kubva ku whitetail deer kuenda kumusango turkeys, huya uongorore nyika dzakachengetedzwa uye utore mutambo wekunze kudivi remusango. Masango edu uye zvatinochengetedza zvichafadza kunyangwe iwe uchitsvaga kukwira kana mukana wekuvhima nehove. Zvakare, ive shuwa yekutarisa yakawanda bhasikoro nzira uye musasa nzvimbo yekugara kwenguva yakareba. Bvisa uye ubatanidze nemasikirwo sezvaaifanira kuve neruzivo!
Kukwira makomo chiitiko chakakurumbira chevagari nevashanyi kuJackson County zvakafanana. Izvi zvinodaro nekuda kwemikana yakawanda yevanofamba-famba vezviitiko zvese zvezviitiko. Kune mamaira anodarika makumi mashanu emakwara ekukwira muJackson County pakati peJackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge uye Starve Hollow State Recreation Area.
Angler kubva kumatunhu ese anozadza Jackson County emvura mumwaka wega wega. Pamusoro pemikana yekuredza hove kuHoosier National Forest, Jackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge uye Starve Hollow State Recreation Area, Jackson County ine nzizi mbiri dzinofarirwa nevavhimi.
IEast Fork White River inoyerera ichidarika nemuJackson County uye inopa akawanda mapindiro eruzhinji munzvimbo dzese, dzinogona kuwanikwa ne pakananga iyi link. Rwizi rweMuscatatuck rwunoganhurana nemataundishipi eVernon neWashington pamwe neJackson neWashington Counties uye zvakare ine nzvimbo dzekupinda neruzhinji. Avo vanoshandisa nzizi muRuwa rweJackson vanokurudzirwa kutora matanho ese ekuchengetedza uye kuverenga kuburikidza nemirau vasati vatanga. Verenga zvimwe na pakananga iyi link.
Kayaking ichiri kukura muJackson County nevakawanda vachishandisa East Fork White River neMuscatatuck River senzira yekubuda nayo nekuongorora zvisikwa. MaKayak anobvumidzwawo kuJackson-Washington State Forest, Starve Hollow State Recreation Area uye Muscatatuck National Wildlife Refuge. Starve Hollow inotopa kayak rendi iyo inogona kushandiswa padhamu rayo panguva yerwendo rwako. Pathfinder Outfitters inopa inotungamirwa kayak kushanya muJackson County. Dzvanya pano kuti udzidze zvakawanda nezve rwendo uye nemitengo.
Pikicha boka rejecha remasandlill panguva yavo yegore yegore yekufamba senzvimbo dzinoverengeka muJackson County inzvimbo dzekuzorora dzeshiri. Tsvaga gondo rine mhanza riri kutiza, tarisa otters erwizi vachinanaira pamwechete pamatombo, kana kutarisa mhembwe sezvavanenge vachidya nemumaruwa.
Une chokwadi chekuwana nzvimbo dzakawanda dzekunakidzwa kwekunze muJackson County!
Hemlock Bluff Yakachengetedza
Hoosier Sango renyika
Jackson-Washington State Sango / Skyline Dhiraivha
Knobstone Glade Zvisikwa Chengetedza
Hickory Hills Gorofu Kirabhu
Yakavakirwa mumakomo anotenderera eJackson County, kosi yacho ine maburi mapfumbamwe ane 3,125 yadhiji yevarume uye 2,345 yevakadzi vane par 35 yevari vaviri. Zvivakwa zvinosanganisira snack bar uye pro shopu. Hickory Hills Golf Club iri pa1509 S. State Road 135 muBrownstown.
Inowanikwa padyo padyo neI-65, Shadowood inoratidzira maburi gumi nesere ane makumi manomwe nematanhatu uye yadhiyadhi ye18. Zvivakwa zvinosanganisira klubhousehouse, pavilion, snack shopu, pro shopu, uye kutyaira renji. Shadowood iri pa72 N. Sandy Creek Drive muSeymour.
Dzika musasa muJackson County, IN
Kana iwe nemhuri yako muchitsvaga nzvimbo yerwendo rwenyu rwunotevera rwekudzika musasa, Jackson County inopa akawanda masayiti akanaka akakwana kwenguva pfupi kana refu. Zvisinei nemhando ipi yemisasa yaungangoda iwe, yedu saiti ichave iwe yawakafukidza.
Nzvimbo dzedu dzekutandarira uye mapaki anopa matatu marudzi emisasa: makamuri, nzvimbo dzeRV, uye nzvimbo dzekare. Makabhati akakwana kune avo vanosarudza kurara mukati kana kune avo vasina tende kana RV. Nzvimbo dzedu dzeRV dzinopa vashanyi nzvimbo yekuwana magetsi. Iwo masende echinyakare akagadzirirwa tsika yechinyakare, nematende nekubikira pamoto.
Veruzhinji mikana yekudzika misasa inowanikwa ku Jackson-Washington State Sango or Nzara Hollow State Nzvimbo Yekuvaraidza.
Mushure mekuwana yakakwana nzvimbo yekudzika musasa, nakidzwa nekukwira munzira dzakasiyana siyana kubva pane nyore kusvika kune yakaoma zvakanyanya. Kutasva bhiza kunowanikwa munzvimbo zhinji dzine mvumo yenyika, sezvakaita gomo kuchovha. Kana hove iri pachirongwa, Jackson County ine nzvimbo dzakasiyana siyana dzaungasarudze kubva uye uye kunyange inopa rowboat, kayak uye canoe rentals. Rezinesi renyika rinodiwa. Usakanganwa nezvevaya vavhimi mumhuri. Kuvhima kunotenderwa munzvimbo dzakasiyana siyana nemvumo chaiyo. Ivo vanoshambira mumhuri vachada mahombekombe nemvura kuStarve Hollow State Recreation Area.
Muscatatuck Nyika Yemusango Refuge muSeymour, IN
Kwemakore, vagari vemuJackson County nevashanyi vakafarira runako rwezvisikwa muMuscatatuck National Wildlife Refuge. Nezviuru zvemaeka enzvimbo nyoro uye nzvimbo dzematanda, vashanyi vane mukana wekunakidzwa nekunze kwekunze munzira nyowani. Nzvimbo yekutizira iri kure neUS 50 chinhambwe kubva kuMugwagwa 65 uye zvirinyore kubva kuIndipolis, Louisville kana Cincinnati.
Zviitiko Zvekuchengetedza Zvemusango
Paunoshanyira Muscatatuck Wildlife Refuge, pane zviitiko zvemhuri yese. Chimwe chezviitiko zvekupotera, kune vashanyi vazhinji, ndiwo mukana wekuona mhuka munzvimbo dzadzo dzekugara. Nzvimbo yekutizira musha kune anopfuura mazana matatu emarudzi eshiri dzinofamba-famba, kusanganisira mbiri yemakondo ane hura. Vanhu vanonakidzwawo nekutarisa nzvimbo yemuno yemakungwa otters pavanenge vachivhima nekutamba munzira dzekupotera. Pamwe pamwe nekuona mhuka, vashanyi vanonakidzwa nekufamba munzira dzinoyevedza, uye kutenderera Myers 'Cabin, yakadzoreredzwa, kutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri uye imba yembavha, ndeyaMyers Mhuri. Kubata hove, kuvhima, uye kutora mhuka dzesango zvakare zviitiko zvinozivikanwa.
Nzvimbo yekutizira inoitirawo zviitiko zvegore negore zvinosanganisira Wings Over Muscatatuck, Log Cabin Day, Tora Zuva reKubata Kwevana, Zuva reWetlands, chiitiko cheSandhill Crane uye zvimwe zvakawanda.
Iyo Muscatatuck Wildlife Refuge yakavambwa muna 1966 senzvimbo yekufambira shiri kunozorora nekudya. Chinangwa chayo ndechekudzivirira uye kudzorera ivhu nemigwagwa yemvura, zvichibvumira shiri, mhuka dzinokambaira, zvinokambaira, uye hove kuidaidza kuti kumba.
Vashanyi vane mibvunzo nezvezviitiko zviri kuuya, dzimwe nzvimbo dzekuvaraidza, kana zvimwe zviitiko zvinofanirwa kubata Muscatatuck National Wildlife Refuge paFacebook kana kufonera 812-522-4352.
Jackson County inopa hukuru hukuru! Masango akanaka, nzvimbo yekuchengetedza mhuka yemusango uye nzvimbo yekutandarira yenyika inopa mamaira ekufamba-famba, makomo kuchovha uye nzira dzekutasva mabhiza, pamwe nehove, kuvhima uye mikana yekudzika musasa. Jackson County inogara kumitambo miviri yegorofu uye zviitiko zvegore negore zvekunze.
Dzvanya apa kurodha BIKE Jackson County County "Buda Uende." Mepu
Dzvanya apa kurodha pasi iyo Jackson County Kunze Rec Gwara